Nepalistudio » प्रचण्डलाई मुख्यमंत्री राउतको चेतावनी : प्रदेश २ को सरकार ढालेर देखाउ ? प्रचण्डलाई मुख्यमंत्री राउतको चेतावनी : प्रदेश २ को सरकार ढालेर देखाउ ? – Nepalistudio
प्रचण्डलाई मुख्यमंत्री राउतको चेतावनी : प्रदेश २ को सरकार ढालेर देखाउ ?
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मुख्यमंत्री राउतले प्रदेश २को सरकार ढालेर देखाउन चेतावनी दिएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमंत्री लालबाबु राउतले चुनौती दिदै सरकार ढालेर देखाउन अग्रह गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफु धम्कीबाट नडराउने भन्दै भने, ‘हामी त्यस्ता धम्कीबाट डराउने छैनौं ‘। उनले बहुमत पुगे सरकार बनाए हुन्छ, सरकार बनाउन उहाँलाई कसले रोकेको छ र ?’ भने । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको धम्कीबाट आफू नडराउने प्रष्टियाए ।
राउतले थपे , ‘संघीय सरकारमा भइरहेको भ्रष्टाचार बारे जगजाहेर छ, प्रचण्ड जीलाई यसबारे थाह छ कि छैन ?’, ‘प्रदेश सरकारले कहाँ कति भ्रष्टाचार गरेको छ प्रचण्डजीले देखाइदिनु परयो । कर्मचारी नै नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कसरी भ्रष्टाचार भयो ?’